Isku dhacyo khasaara dhaliyay oo dhex maray Muslimiinta & Masiixiyiinta qibdiga Masar. – SBC
Isku dhacyo khasaara dhaliyay oo dhex maray Muslimiinta & Masiixiyiinta qibdiga Masar.
Posted by editor on May 8, 2011 Comments
In ka badan 9 qof ayaa ku dhintay,75 kalena waa ay ku dhaawacmeen isku dhacyo ku dhex maray Muslimiinta iyo weliba Masiixiyiinta qibdiga Masar,xaafada Ambaaba oo ka tirsan deegaanka Jiizah ee Xarunta dalka Masar ee Qaahira.
Isku dhaca diimeed ayaa yimi kadib markii koox ka tirsan Salafiyiinta ay isku hareereeyeen Kaniisada Marmiina,iyadoona horay qibdiyiintu ay u dalbadeen in loo soo gacan galiyo gabar Masiixi ah oo la sheegay in ay qaadatay diinta Islaamka.
Ciidamada Booliska Magaalada Qaahira ayaa kadib israsaasayn saacado socotay oo ay labada dhinac ee iska soo horjeeday ku dhex maraysay deegaanka ay Kaniisadu ku taal,waxaa ay ugu dambayn ku guulaysteen in ay kala dhex galaan.
Kaniisada ay ka dhacday iska hor imaadka ayaa waxaa gubay mid kamid ah labadii koox ee iska soo horjeeday,iyadoona dowlada dalkaasi Masar ay ku aamaantay qaar kamid ah dhalinyarada muslimiinta ee ku nool deegaankaasi gurmadka ay u fidiyeen dadkii ku guda jiray dabkii ka kacay kaniisada.
Isku dhacyada U dhexeeya Qibdiyiinta Masiixiga ah iyo Muslimiinta salafiga ah ee dalka Masar ayaa noqday kuwo soo laablaabta,iyadoona wakhti sii horaysay kaniisad ay masiixiyiinta Masar leeyihiin ay kxoo hubaysan inta ay gashay ay ku dishay dhamaan dadkii ku jiray.